Sociic - Adeegyada Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
Faallada YouTube ayaa Jecel [UPVOTES]
Faallooyinka YouTube -ka Diidmada [DOWNVOTES]
Twitch Muuqaalada Channel
Raadso Dadka raacsan
Taageerayaasha TikTok (Raacayaasha)
Alaab kuma jirto gaadhiga!
Fadlan samee doorashadaada.
Eeg dhammaan liisaska
Sociic waa adeeg suuqgeyn warbaahin bulsheed oo aad loo amaanay oo shirkad siinaya shaqaale xirfad iyo xirfadlayaal ah oo kaa caawin kara kobcinta meheraddaada, xaaladda bulsheed iyo aqoonsigaaga intarneedka.
Isniin-Jimco 9 subaxnimo ilaa 6-da galabnimo
#1 Suuqa Suuqa Adeegyada Warbaahinta Bulshada
Kobci Heerkaaga Bulshada Hadda
Iibso kuwa raacsan ee Instagram -ka dhabta ah, Jecel, Aragtida Fiidiyaha, Faallooyinka Qiimaha ugu jaban
Iibso Muuqaallada YouTube -ka dhabta ah, Jecel, Macaamiisha, Faallooyinka, Saamiyada Qiimaha ugu jaban
Iibso Real Twitch Raacayaasha, Aragtida Kanaalka, Aragtida Live, Macaamiisha Qiimaha ugu jaban
Waxaan ku siinaynaa Adeegyada Bulshada ee ugu dhaqsaha badan suuqa. Dhammaan amarada Lacag -bixinta waxaa lagu baaraa wax ka yar hal daqiiqo marka uu xaqiijiyo xubin ka tirsan shaqaalaha.
Kooxda Taageerada Gaarka ah
Shaqaalaheena taageerada u heellan had iyo jeer waa la heli karaa. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto adeegyadayada ama aad wax dhibaato ah kala kulanto dalabkaaga, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.
Nabadgelyadu Waa Mudnaantayada Feedhka
Uma baahnin aqoonsiga koontadaada. Marka, waa nabad oo ma jirto fursad koontada la jabsaday oo la mamnuucay
Dadku ma doorbidaan inay waqti geliyaan wax u eg isbeddellada duugga ah. Taa bedelkeeda, markay arkaan xubinimada kale oo si firfircoon uga qayb qaadata shabakadaha Bulshada, waxay ka dhigaysaa inay qaataan go'aan adag oo ku saabsan maalgashiga iyagoon ka fikirin ilbiriqsi. Warka fiicani waa in ay tahay waqti-badbaadin, kharash-ku-ool ah oo u shaqaysa sida soo jiidashada. Oo waxaa jira meeshii aan soo galnay, oo ku siineyna madal kaa caawin karta inaad sare u qaaddo darajooyinkaaga Bulshada waqti yar.
Baadhitaannadu waxay muujinayaan lectores legere.
Waxaan rabnaa inaan uga tagno macmiishayada raadka aan ku reebno. Haddii aadan ku qanacsanayn tayada ama bixinta dalabkaaga, noo sheeg. Waxaan isku dayi doonaa inaan sida ugu dhaqsaha badan u kala saarno!
Qiimaha ugu hooseeya
Waxaan bixinnaa qiimaha ugu hooseeya shabakadda. Waxaan sii wadnaa tallaabada dheeriga ah waxaanna sheegnaa haddii aad heli karto shirkad kasta oo diiwaangashan oo sheeganaysa adeeg ka wanaagsan, waxaan garaaci doonnaa qiimaha ay bixiyaan.
Macaamiisha Farxada leh ee nagu saabsan
Goobtani waxay iga caawisay inaan helo taageerayaal badan waxaana jira taageero runtii cajiib ah
Websaydh cajiib ah oo lagu dalbado adeegyada bulshada oo hadda la dalbaday 10000 twitch macaamiishu markay soo jeestaan ​​waqtigu aad buu u xumaa
Sociic waa adeeg suuqgeyn warbaahin bulsheed oo aad loo amaanay oo siinaya shirkad shaqaale xirfad leh iyo xirfadlayaal kaa caawin kara kobcinta ganacsigaaga, xaaladda bulshada iyo aqoonsigaaga intarneedka. Shirkadeena waxay bixisaa adeegyo la awoodi karo oo aad u sarreeya. Adeegyadu waa kuwo dabacsan oo natiijooyinka si dhakhso ah ayaa loo arki karaa marka la barbar dhigo bixiyeyaasha adeegga kale. Waxaan u gudubnay shirkad deggan oo leh macaamiil sumcad leh.
Xuquuqda daabacaadda © 2018 - 2021 | Sociic